सात बाणिज्य बैंकको ब्याजदर सार्वजनिक, हेर्नुहोस् कुन बैंकको कति ? - samayapost.com
सात बाणिज्य बैंकको ब्याजदर सार्वजनिक, हेर्नुहोस् कुन बैंकको कति ?
समयपोष्ट २०७७ भदौ ३१ गते १३:१२
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहितका सात बाणिज्य बैंकले पछिल्लो ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक, सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, एभेरेष्ट बैंक र स्टाण्डर्ड चार्टड बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले साधारण निक्षेपमा ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने उल्लेख गरेको छ । यो बैंकले मुद्धति निक्षेपमा भने व्यक्तिगत ६ प्रतिशत र संस्थागत ५ प्रतिशतदेखि अधिकतम् ७.२५ प्रतिशतसम्म दिने जनाएको छ । कर्जातर्फ भने बैंकले बेस रेटमा न्युनतम् १.२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम् ३.२५ प्रतिशत लिने जनाएको छ । बैंकको असार मसान्तमा बेस रेट ५.८० प्रतिशत रहेको छ ।
सनराइज बैंकले साधारण निक्षेपमा २.५० प्रतिशतदेखि ४.५० प्रतिशतसम्म र मुद्धति निक्षेपमा ७.७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने उल्लेख गरेको छ । कर्जातर्फ भने सनराइजले बेस रेटमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर लिने बताएको छ । असार मसान्त्सम्म बैंकको बेस रेट ८.९५ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल एसबीआई बैंकले साधारण निक्षेपमा अधिकतम् ५ प्रतिशतसम्म दिने उल्लेख गरेको छ । मुद्दति निक्षेपमा भने ७.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने उल्लेख गरेको छ । कर्जामा भने एसबीआई बैंकले बेस रेटमा १.५ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर लिने उल्लेख गरेको छ ।
एभरेष्ट बैंकले साधारण निक्षेपमा २.५० प्रतिशतदेखि ४.५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बताएको छ । मुद्धति निक्षेपमा भने एभरेष्ट बैंकले ५.५० प्रतिशतदेखि ७.२५ प्रतिशतसम्म दिने बताएको छ । कर्जाको ब्याजदर भने बेस रेटमा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर लिने उल्लेख गरेको छ । एभरेष्ट बैंकको बेस रेट साउन मसान्तसम्म ७.४८ प्रतिशत रहेको छ ।